काठमाडौंमा घर हुने सांसदलाई पनि आवास सुविधा ! » खबरहरुको एउटै केन्द्र
काठमाडौंमा घर हुने सांसदलाई पनि आवास सुविधा !
संघीय संसदका सदस्य बुझ्छन् मासिक एक लाख (सूचीसहित)
शुक्रबार, बैशाख ७, २०७५ ०९:४१ मा प्रकाशित !
६ वैशाख, काठमाडौं । संघीय संसदका करीव आधाजसो सांसदहरुको घर काठमाडौं उपत्यकामा छ । तर, उनीहरुले पनि राज्यबाट घरभाडा बुझ्न पाउने भएका छन् ।
विगतमा पनि काठमाडौंमै घर भएका थुप्रै माननीयहरुले डेरा भाडा बुझ्ने गरेका थिए । यसपटक पनि राजधानीमा घर हुने सांसदले आवास सुविधा नपाउने भन्ने नियम नबनेपछि सबै सांसदलाई घर भाडा बुझ्ने बाटो खुलेको छ ।
संसद सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘कानुनले आवास सुविधा सबै सांसदलाई समान रुपमा दिएको छ । काठमाडौंमा आफ्नै घर भएकाले लिने कि नलिने भन्ने चाहिँ सम्बन्धित माननीयज्यूको नैतिकतामा भर पर्ने कुरा हो ।’
स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म कुनै पनि सांसदले आवास सुविधा नलिने भनेर निवेदन दिएका छैनन् ।
राज्यबाट आवास सुविधा लिने सांसदको सूचीमा विश्वकै धनी व्यक्तिको सूचीमा पर्ने विनोद चौधरीदेखि पूर्वकमलरी समेत रहेकी शान्ता चौधरीसम्म समान हैसियतमा देखिन्छन् ।
२१ फागुनमा सपथ दिएका सांसदहरुले त्यो महिनाको सेवा सुविधा दिनगन्तीका आधारमा पाएका छन् । चैतबाट भने बैंक खातामा एकमुष्ट जम्मा हुन्छ ।
राज्यले आवास सुविधा बापत आवास नै दिएका सभामुखले घरभाडा वापत् २८ हजार २७५ रुपैयाँ पाउँछन् । राष्ट्रियसभा अध्यक्षले पनि सभामुखकै जति सुविधा पाउँछन्
केके छन् सांसदका सुविधा ?
यो संसद निर्वाचित भएर आउनुअघि नै विघटित व्यवस्थापिका संसदले सेवासुविधा तोकेको थियो, जसअनुसार सांसदले आवास सुविधा बापत मासिक १८ हजार रुपैयाँँ पाउँँछन् ।
भाडाकै घरमा बस्ने सांसदहरुले भने यो रकम अपुग भएको बताउँदै आएका छन् । उनीहरुका अनुसार काठमाडौंमा कम्तिमा एक फ्ल्याट भाडामा लिनुपर्ने बाध्यता छ । यसको मध्य शहरमा ३० हजारभन्दा माथि पर्छ भने चक्रपथ बाहिर पनि २० हजारभन्दा कममा पाउन मुस्किल रहेको सांसदहरु बताउँछन् ।
राज्यले आवास सुविधा बापत आवास नै दिएका सभामुखले घरभाडा वापत् २८ हजार २७५ रुपैयाँ पाउँछन् । राष्ट्रियसभा अध्यक्षले पनि सभामुखकै जति सुविधा पाउँछन् ।
दुबै सदनका विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख, सत्तापक्षका नेता, मुख्य सचेतक लगायतले आवास सुविधा बापत मासिक २५ हजार ६०८ रुपैयाँ पाउँछन् । दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षका सचेतक र विपक्षी दलका सचेतकले आवास सुविधा पावत मासिक २४ हजार २६८ रुपैयाँ पाउँछन् ।
अन्य सुबिधा के-के ?
संघीय संसदका सभामुखदेखि सांसदसम्म सबैलाई फर्निचर खर्च बापत सचिवालयले एकमुष्ठ रुपमा १५ हजार रुपैयाँ दिन्छ ।
सञ्चार सुविधा बापत मासिक ३ हजार पाउँछन् । सांसददेखि सभामुखसम्मका सबै पदाधिकारीले बैठक भत्ता र यातायात खर्च बाहेक विशेष भत्ता भनेर मासिक थप एक हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । दैनिक भ्रमणभत्ता बापत सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले ३ हजार रुपैयाँ पाउँछन् भने सांसदहरुले २५०० रुपैयाँ पाउँछन् । यस्तो भ्रमण भने स्वीकृत हुनुपर्छ ।
मासिक पारिश्रमिक सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले ६७ हजार ३२० रुपैयाँ पाउँछन् । विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख र उपाध्यक्षले ६० हजार ९७० रुपैयाँ पाउँछन् ।
प्रमुख सचेतकहरुले ६० हजार ९७० र अन्य दलका प्रमुख सचेतक र सत्तापक्षका सचेतकले ५७ हजार ७८० रुपैयाँ पाउँछन् । सांसदको मासिक तलब भने ५५ हजार २३० रुपैयाँ हुन्छ । संसद बैठक बसेको दिन बैठक भत्ता एक हजार रुपैयाँ हुन्छ भने यातायात सुविधा पनि एक हजार रुपैयाँ नै दिइन्छ । पदाधिकारीलाई भने संसद सचिवालयले गाडी सुविधा नै उपलव्ध गराउँछ ।
सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षको पानी र बिजुलीको बिल सरकारले तिर्छ भने अरुले मासिक २ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । यो सबै जोड्दा मिलाएर एकजना सांसदले मासिक रुपमा तलब भत्ता र सुविधावापत झण्डै ८० हजार रुपैयाँ बुझ्छन् । साथै एक महिनामा १० वटासम्म संसद बैठक बस्यो भने बैठक भत्ता र यातायात खर्च बापत २० हजार गरी कुल एक लाख रुपैयाँ बुझ्छन् ।
अन्य पदाधिकारीहरुको भने सबै सुबिधा योभन्दा बढी हुन्छ । सुबिधा सम्बन्धी संशोधित ऐनअनुसार कुनै सांसद अशक्त भएमा एकमुष्ठ ५० हजार पाउँछन् भने मत्यु भएका सांसदका परिवारले २ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता पाउँछन् ।
हेर्नुहोस् सांसदहरुले पाउने सुविधाको सूची
PREVIOUS POST Previous post: चिनियाँ बुद्धिजिवी भन्छन् – ‘एमाले-माओवादी एकता चाँडै होस्’
NEXT POST Next post: मालिन्दो एयरको विमानलाई दुर्घटनास्थलबाट हटाइयो
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते शुक्रबार, बैशाख ७, २०७५ ०९:४१
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस शुक्रबार, बैशाख ७, २०७५ ०९:४१
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण शुक्रबार, बैशाख ७, २०७५ ०९:४१
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी शुक्रबार, बैशाख ७, २०७५ ०९:४१
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? शुक्रबार, बैशाख ७, २०७५ ०९:४१